Liverpool ma iibinayso Philippe Coutinho - BBC Somali
Liverpool ma iibinayso Philippe Coutinho
Image caption Philippe Coutinho iyo Jurgen Klopp
Ciyaaryahanka kubadda u qaabeeya Liverpool, Philippe Coutinho ma aha iib, inkastoo ay danaynayso kooxda Barcelona, sida uu sheegay tababaraha kooxda Jurgen Klopp.
Klopp ayaa sheegay in naadigiisa lagu naanaysto Reds aysan ahayn "koox wax iibin u dhisan" hadalkaas ayaana ka soo yeeray ka dib markii la sheegay in ay diideen dalab 72 milyna oo gini ah oo lagu iibin lahaa ciyaaryahankan reer Brazil, bishii Luulyo.
Arrintan ayaa imaanaysa iyada oo badhtanka lagaga jiro wararka sheegaya in Barcelona ay ka baaraandagayso dalabka la sheegay in PSG ay ku raadjoogto Neymar oo afka hore ka dheela oo ay ku doonayso 198 milyan oo gini.
"Haddii aad dhahdo ma iibinayno, ma sharaxaad kalay u baahan tahay?" Klopp ayaa sidaas yiri isniintii.
Coutinho oo 25 jir ah ayaa kabtanka kooxda ahaa markii ay Liverpool 3-0 kaga badisay kooxda Hertha Berlin oo ay ciyaar saaxiibtinimo yeesheen Talaadadii.
Xilli ciyaareedkii horena 14 gool ayuu u dhaliyay kooxda, isaga oo lix todobaad kaga maqnaa dhaawac ka soo gaaray anqawga, qandaraas cusub oo shan sano ah ayuuna u sixiixay kooxda bishii Janaayo ee sannadkan.
Xilliciyaareedkaas ayaana u ahaa kii ugu wax tar badnaa tan iyo markii uu kooxda kaga yimid Inter Milan isaga oo laga soo siistay 8.5 milyan oo gini sannadkii 2013kii.